အမည်နှင့်အမည်သစ်ကိုရသော Fedde Lalumiere ။ ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အဓိပ်ပာယျ, ဇာစ်မြစ်, ထိုအမည်နှင့်အမည်သစ်ကိုရသော Fedde Lalumiere ၏လိုက်ဖက်တဲ့။ အားလုံးအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ။
ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အဓိပ္ပာယ်ကို Fedde ။ ပထမအမည်ကို Fedde ဘာကိုဆိုလိုသလဲ
ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ Fedde ။
အခြားဘာသာစကားများ, စာလုံးပေါင်းနှင့်အသံထွက်မျိုးကွဲ, ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အမျိုးသမီးနှင့်အထီးမျိုးကွဲ Fedde ၌ဤပထမဦးဆုံးနာမည်။
သင်ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ဘာသာစကားများ Fedde စီရင်သလဲ?
ဘယ်လိုပထမအမည်ကို Fedde Learn အခြားတိုင်းပြည်တွင်အခြားသောဘာသာစကားအားဖြင့်ပထမအမည်ကိုမှကိုက်ညီ။
Fedde မျိုးရိုးအမည်နှင့်အတူ Compatibility ကိုစမ်းသပ်အမည်။
Fedde အခြားအပထမဦးဆုံးအမည်များနှင့်အတူ Compatibility ကိုစမ်းသပ်။
Fedde အကောင်းဆုံးနာမကိုအမှီအဓိပ္ပါယ်များ: ကံကောင်း, စေတနာစိတ်နှင့်, အရည်အချင်း, ဖန်တီးမှု, စေ့စေ့နားထောင်. ရယူ Fedde နာမတျော၏အဓိပ္ပာယ်ကို.
Fedde ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ. Short form of Frisian names beginning with the Germanic element frid "ငြိမ်းချမ်းရေး" ။ ရယူ Fedde ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ.
ကူးယူမှတ်တမ်းတင်သို့မဟုတ်ဘယ်လိုပထမအမည်ကိုအသံထွက်ဖို့ Fedde: FED-də. Fedde စီရင်ဖို့ကိုဘယ်လို.
Fedde ဘို့ပြောရလျှင်အမည်များကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ဘာသာစကားများ: Bedřich, Federico, Federigo, Fiete, Fred သည်, Freddie, ဖရက်ဒီ, ဖရက်ဒရစ်, Frederico, Frederik, Fredo, Fredric, Fredrick, Fredrik, Frédéric, Freek, Fricis, Friderik, Frīdrihs, Friduric, Friedrich, Frigyes, Friðrik, Frits, Fritz, Fryderyk, Rik, Veeti. ရယူ Fedde အခြားဘာသာစကားများ.
နောက်ဆုံးအမည်နှင့်အတူအသုံးအများဆုံးအမည်များ Lalumiere: Walton, Donald, Sanjuana, Jenny, Landon. ရယူ Lalumiere နှင့်အတူသွားသောအမည်များ.
Fedde Lalumiere အလားတူအမည်များနှင့်မျိုးရိုးအမည်
Fedde Lalumiere Bedřich Lalumiere Federico Lalumiere Federigo Lalumiere Fiete Lalumiere Fred သည် Lalumiere Freddie Lalumiere ဖရက်ဒီ Lalumiere ဖရက်ဒရစ် Lalumiere Frederico Lalumiere Frederik Lalumiere Fredo Lalumiere Fredric Lalumiere Fredrick Lalumiere Fredrik Lalumiere Frédéric Lalumiere Freek Lalumiere Fricis Lalumiere Friderik Lalumiere Frīdrihs Lalumiere Friduric Lalumiere Friedrich Lalumiere Frigyes Lalumiere Friðrik Lalumiere Frits Lalumiere Fritz Lalumiere Fryderyk Lalumiere Rik Lalumiere Veeti Lalumiere